Ra’iisal Wasaaraha Dalka Tuunis Ilyaas Al-Fakh-Faakh oo Ku Dhawaaqay Golihiisa Wasiirada – Radio Baidoa
Ra’iisal Wasaaraha Dalka Tuunis Ilyaas Al-Fakh-Faakh oo markii horeba haystay mudo kooban si uu usoo dhiso xukuumad loo dhan yahay oo ay ka dhex muuqdaan xisbiga muxaafidka ah iyo dhamaan xisbiyada kale ee ka jira dalkaas ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay golihiisa cusub ee Wasiirada Dawladda Tuunis.
Xukuumadda uu soo dhisay Ra’iisal Wasaare Al-fakh-faakh waxa uu la tashi kala yeeshay Madaxweynaha dalka Tuunis mudane Qays Saciid isagoo ku wargeliyay qaabka ay noqonayso xukuumadda uu doonayo inuu soo dhiso, waxaana Madaxweyne Qays uu isaguna ku qancay xukuumadda uusoo dhisay Mudane Ilyaas Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Tuunis.
Fakh-faakh wuxuu tilmaamay inuu waqti badan ku bixiyay dhismaha xukuumad kooban oo ku dhisan kala duwanaanta aragtida siyaasadeed ee xisbiyada dalka Tuunis, taasoo ka dhalatay sida uu sheegay wada tashiyo ballaaran oo uu la sameeyey xisbiyada mucaaradka oo uu ugu muhiimsan yahay xisbiga Al-nahda.
Hogaamiyaasha xisbiga Al-nahda iyo axsaabta kale ee Tuunis ayaa dhankooda sheegay inay soo dhoweynayaan xukuumadda uu soo dhisay Ra’iisal Wasaare Fakh-faakh iyagoo baarlamaanka Tuunis u jeediyay codsi ku salaysan inay meel mariyaan ama ansixiyaan xukuumadda cusub.
Madaxweynaha Dawladda Tuunis Mudane Qays Saciid ayaa dhankiisa bogaadiyay dedaalka uu sameeyey Ra’iisal Wasaare Ilyaas Fakh-faakh wuxuuna baarlamaanka Tuunis ka dalbaday inay cod aqlabiyad leh ku meel mariyaan golaha xukuumadda cusub si loo sii anba qaado shaqada hor taalla Dawladda.
DHegeyso,,Xaliimo yareey oo sheegtey in Galmudug ay kamid tahy Goobaha Doorashadu kadhici karto